I-ShazamKit ivumela abaphuhlisi ukuba badibanise i-Shazam kwii -apps zabo | IPhone iindaba
I-ShazamKit ivumela abaphuhlisi ukuba badibanise uShazam kwii -apps zabo
Ingelosi Gonzalez | 19/06/2021 13:00 | iOS 15, WWDC 2021
Enye yeempumelelo ezinkulu ngokwee -apps ngokungathandabuzekiyo Shazam. Le app ikuvumela ukuba uqaphele ukuba yeyiphi ingoma evakalayo ngokurekhoda isiqwenga esincinci nokuba sinengxolo yangasemva. Oku kufezekiswa ngenxa yetekhnoloji yokuthelekisa phakathi kwekhathalogu enkulu enezigidi zeengoma. Kwi-2017 i-Apple yathenga inkampani kwaye ukusukela ngoko yadibanisa yonke itekhnoloji kwiinkqubo zayo zokusebenza. Ngoku lixesha lokuyithatha ngaphaya kwe-iOS kunye ne-iPadOS ngokusungula Ikhithi yophuhliso lweShazamKit, evumela abaphuhlisi sebenzisa iteknoloji ngaphakathi kwii -apps zakho, nkqu nabaphuhlisi be-Android.
I-Apple yenza ikhithi yophuhliso yokwazisa umculo: ShazamKit
Ukuphuhlisa imisebenzi kwizicelo zakho ngokuqaphela umculo kunye nokudibanisa abasebenzisi kunye nekhathalogu yomculo kaShazam. I-ShazamKit ikuvumela ukuba ucebise amava akho osetyenziso ngokuvumela abasebenzisi ukuba bafumane igama lengoma, ngubani owaculayo, uhlobo, kunye nokunye. Funda apho umdlalo wafunyanwa khona kwingoma yokuvumelanisa umxholo kunye namava omsebenzisi.
Este Ikhithi yophuhliso Ayisiyiyo nje kuphela ngoShazam kunye nokuqonda umculo. Iya phambili ngakumbi: izakuphatha itekhnoloji esetyenziswa nguShazam zosetyenziso lonjiniyela. Ngamanye amagama, umphuhlisi ngoku uyakwazi ukuvelisa iilayibrari zabo ezinesandi kwaye azidibanise nenkqubo efana neShazam. Ukulungiselela amava akho kwizicelo ezizizo.
Ukongeza, akukho mfuneko yokuba umculo udlalwe ngaphandle kwaye usebenzise ii-microphone zesixhobo ukurekhoda, kodwa ke inokurekhodwa ekuhlaleni, kwangaphambili ephunyezwe yiApple kwiinguqulelo zayo zamva nje zokusebenza kwayo.
Ngolu phehlelelo lokuqalisa lusuka kwikiti ye-ShazamKit, I-Apple igqibezela uhambo olude lokuxhotyiswa kwetekhnoloji kunye nokwandiswa yetekhnoloji ebiza i-Big Apple ngaphezulu kwe-400 yezigidi zeedola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » I-ShazamKit ivumela abaphuhlisi ukuba badibanise uShazam kwii -apps zabo
UDeezer uyila kwakhona i-Deezer yayo yabaDali bohlelo lokusebenza, isixhobo sohlalutyo lweemvumi kunye neepodcasters
I-Frenzic: Ixesha elongezelelekileyo ngumdlalo wepuzzle ngoku ofumanekayo kwiApple Arcade